အဟိံသဓမ္မ နှင့် ဂန္ဒီ ၏ နိုင်ငံရေး အမြင် - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / အဟိံသဓမ္မ နှင့် ဂန္ဒီ ၏ နိုင်ငံရေး အမြင်
အဟိံသဓမ္မ နှင့် ဂန္ဒီ ၏ နိုင်ငံရေး အမြင်
Apann Pyay 10:43 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ဂန္ဒီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သွေးကင်းသော တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်သူ တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သွေးကင်းသော တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် သူကိုယ်တိုင် လက်ခံကျင့်သုံးနေသော အဟိံသဓမ္မ ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက်ရေး အယူအဆကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဟိံသဓမ္မသည် သက္ကတဝေါဟာရ ဖြစ်သည်။ ထိုဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အစဉ်အလာ ရှေးရိုးအယူအဆအားဖြင့်၎င်း၊ ဘာသာဗေဒအားဖြင့်၎င်း၊ သက်ရှိသတ္တဝါများကို အကြမ်းမဖက်ခြင်း (Ahimsa (Sanskrit), Traditionally and Literially, non-violence to Living creatures.) ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ် အိန္ဒိယဒဿ ပညာရှင်များက သတ္တဝါအားလုံးကို ကြင်နာခြင်း (For modern Indian Thinkers,apositive sense of Kindness to all creatures.)ဟူ၍ ကင်းဘရစ် ဒဿန အဘိဓာန် (Cambridage Dictionary of Philosophy) တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အဟိံသဓမ္မဟူသော အသက်ဇီဝရှိသော သတ္တဝါအားလုံးကို သတ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း မပြုရ အယူအဆကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူများသည် ဂျေးနား(Jainas) ခေါင်းဆောင်မဟာဝီရ (Mahavira) နှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒခေါင်းဆောင် ဂေါတမ (Gautama) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဂျေးနားတို့နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အားလုံးသည် အကြမ်းမဖက်ခြင်း သို့မဟုတ်-သူ့အသက်ကို မသတ်ခြင်းကို အမြင့်မြတ်ဆုံး ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားအဖြစ် ခံယူထားကြသည်။ ဂျေးနားဝါဒ၊ ဟိန္ဒူဝါဒ နှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒတို့သည် အဟိံသဓမ္မဖြင့် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွန်မြောက်ခြင်း မုက္ခ (Moksa) ရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဂန္ဒီကမူ လူထဲက လူတယောက် ဖြစ်၍ လူတို့၏ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး နှင့် လောကီရေးတွင် ရည်ရွယ်ပြီး အဟိံသဓမ္မကို လက်ခံကျင့်သုံး ခဲ့သည်။
“အဟိံသဓမ္မသည် အမြင့်မြတ်ဆုံး ကရုဏာထားခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်၊ အဟိံသဓမ္မသည် အကြမ်းမဖက်ခြင်း ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံတို့ကို မကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဟိံသဓမ္မသည် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာနတို့ကို စောင့်ထိန်းခြင်း ဖြစ်သည်၊ အဟိံသဓမ္မသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ကင်းခြင်း၊ သတိရှိခြင်း၊ ကျိုးနွံခြင်းနှင့် ဘုရားကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံထားခြင်း ဖြစ်သည်။”
ဂန္ဒီသည် ယင်းဓမ္မကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားရုံမျှမက တော်စတွိုင်း (Tolstoy)၏ အကြွင်းမဲ့သဘောဆောင်သော ပရဟိတဝါဒ (Absolute Altuism) ကိုလည်း ယုံကြည်စွာ လက်ခံခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။ ဂန္ဒီက လူသည် လူမှုရေး တာဝန်များကို ရှောင်လွှဲ၍ မရချေ။ လူ့လောကတွင် လူမှုရေးတာဝန်ကို ကျော်လွန်၍သော်၎င်း၊ လူမှုရေး တာဝန်နှင့် ကင်းကွာ၍၄င်း၊ ပျော်ရွှင်ချက် ဘာမှကို မရနိုင်ဟု လက်ခံထားသည်။ ဂန္ဒီက အကြမ်းမဖက်ခြင်း ဝါဒကို လက်ခံကျင့်သုံးသူများသည် သစ္စာရှိခြင်း၊ ကျိုးနွံခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်း စသည်တို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်သည်။ အကြမ်းမဖက်ခြင်းသည် လူသား၏ ဝိညာဉ်အား ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် မရှိနိုင်ချေ။ တိရစ္ဆာန်စိတ်ရှိသော သူတို့သည် အကြမ်းဖက်ခြင်း လက်ခံကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ တိရစ္ဆာန်များလည်း ကာယအင်အားကြီးခြင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးထွား နေရသည်။ လူသားစိတ်ထား ရှိသူသည် လူ၏ဉာဏ်သိက္ခာဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို စောင့်ထိန်းရမည့် တာဝန်တရပ်ဟု နားလည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ လူသားသည် ပို၍ မြင့်မြတ်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဂန္ဒီက အကြမ်းမဖက်ရေးနှင့် မေတ္တာထားခြင်းတို့သည် လူသား၏ ဂုဏ်သိက္ခာဟုခံယူသည်။ မည်သည့်အမှုကိစ္စကို မဆို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဖော်ပြပါအယူအဆများသည် လူသားကိုလမ်းညွှန်ပြသ
နေသည်။ အများအကျိုး စီးပွားဖြစ်၍ တဦးတယောက်၏ အကျိုးစီးပွားကို ပျက်ပြားစေခြင်းသည် အကြမ်းဖက်ခြင်းတမျိုးဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို လူသားတဦးတယောက်ကိုသော်၎င်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်ကိုသော်၎င်း၊ မပြုလုပ်သင့်ဟု ဂန္ဒီက အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဂန္ဒီအလိုရ အကြမ်းဖက်မှု ပြုလုပ်သူများကို သည်းခံခွင့်လွှတ်၍ မေတ္တာထားခြင်းဖြင့် နောင်တတရားများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလာမည်ဟုဆိုသည်။ ဂန္ဒီသည် ရန်ကိုရန်ချင်း မတုံ့ပြန်ဘဲ ဗြိတိသျှတို့၏ စစ်ဖိနပ်အောက်မှ သွေးကင်းသော တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ၁၉၃၀-တွင် ဗြိတိသျှတို့က အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားများသည် အသံတိတ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒပြမှုကြောင့် အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားများ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည့်ပြင် ဗြိတိသျှ အာဏာတို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုး ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဂန္ဒီက ဗြိတိသျှအစိုးရကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်နည်း မသုံးဘဲ မေတ္တာထား၍ အကြမ်းဖက်မှုများ ပြန်၍ မပြုကြရန် ဟောပြောခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဂန္ဒီ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး အယူအဆကို ကမ္ဘာက မှတ်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ အသိအမှတ်ပြုသူများ အနက် အဲ့လဗက် အိုင်းစတိုင်း (Albert Einstein) နှင့် လူဝီ ဖစ်ရှား (Louis Fisher) တို့သည် ထင်ရှားသည်။
“ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင် အဲလဗတ်အိုင်စတိုင်းက အန္ဒိယအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်၍ ပြင်ပနိုင်ငံများမှ အားပေးကူညီမှုကို မရရှိခဲ့ချေ။ တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်နိုင်မှု ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်အင်အားကိုမျှ အသုံးမပြုခဲ့ချေ။ ဥရောပ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို သာမန်လူသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယသည် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်ဟု ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခဲ့သည်။
“လူဝီဖစ်ရှားက အိန္ဒိယသည် အဏုမြူကို စွန့်လွှတ်၍ အဟိံသဓမ္မကို လက်ကိုင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂန္ဒီသည် နျူကလီးယားနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ငယ်သောကလေးအဆင့်တွင် ရှိနေသော်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမြင်ကျယ်ပြီး ရင့်ကျက်သူတဦး ဖြစ်သည်။ ဂန္ဒီသည် သူတပါး၏ အသက်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိသော်လည်း နှစ်ဆယ်ရာစုတွင် အသက်ရှင်နေနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍မူ များစွာအထောက်အကူ ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု လူဝီဖစ်ရှာက ဂုဏ်ပြုဖော်ပြထားသည်။
ထို့ကြောင့် ဂန္ဒီ၏ ဒဿနကိုကြည့်လျှင် အဟိံသဓမ္မ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ပြီး အရာရာကို အဟိံသဓမ္မဖြစ်သော အကြောင်း၊ စာဖတ်ရရေးဝါဒ ရှုထောင့်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရရုံမျှမက သူ၏ အဟိံသဓမ္မသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြမ်းတမ်းဆုံး လက်နက်များထက်ပင် စွမ်းပကားကြီးမားခဲ့သည်ကို
သွေးကင်းသော အိန္ဒိယတော်လှန်ရေးဖြင့် သက်သေပြခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပေသည်။
Credit -Soe Oo (dathana)
အဟိံသဓမ်မ နှငျ့ ဂန်ဒီ ၏ နိုငျငံရေး အမွငျ
ဂန်ဒီသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ ထငျရှားသော ကမ်ဘာ့အသိအမှတျပွု နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတဦးဖွဈသညျ။ သူသညျ သှေးကငျးသော တျောလှနျရေးကို ဦးဆောငျသူ တဦးလညျးဖွဈသညျ။ ယငျးသို့ သှေးကငျးသော တျောလှနျရေးကို ဦးဆောငျနိုငျခဲ့ခွငျးသညျ သူကိုယျတိုငျ လကျခံကငျြ့သုံးနသေော အဟိံသဓမ်မ ဖွဈသညျ့ အကွမျးမဖကျရေး အယူအဆကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ အဟိံသဓမ်မသညျ သက်ကတဝေါဟာရ ဖွဈသညျ။ ထိုဝေါဟာရ၏ အဓိပ်ပါယျကို အစဉျအလာ ရှေးရိုးအယူအဆအားဖွငျ့၎ငျး၊ ဘာသာဗဒေအားဖွငျ့၎ငျး၊ သကျရှိသတ်တဝါမြားကို အကွမျးမဖကျခွငျး (Ahimsa (Sanskrit), Traditionally and Literially, non-violence to Living creatures.) ဟူ၍ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုခဲ့ကွသညျ။ ခတျေသဈ အိန်ဒိယဒဿ ပညာရှငျမြားက သတ်တဝါအားလုံးကို ကွငျနာခွငျး (For modern Indian Thinkers,apositive sense of Kindness to all creatures.)ဟူ၍ ကငျးဘရဈ ဒဿန အဘိဓာနျ (Cambridage Dictionary of Philosophy) တှငျ ဖှငျ့ဆိုထားသညျ။ အဟိံသဓမ်မဟူသော အသကျဇီဝရှိသော သတ်တဝါအားလုံးကို သတျဖွတျညှဉျးပနျး နှိပျစကျခွငျး မပွုရ အယူအဆကို ဖျောထုတျခဲ့သူမြားသညျ ဂြေးနား(Jainas) ခေါငျးဆောငျမဟာဝီရ (Mahavira) နှငျ့ ဗုဒ်ဓဝါဒခေါငျးဆောငျ ဂေါတမ (Gautama) တို့ ဖွဈကွသညျ။ ဂြေးနားတို့နှငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြား အားလုံးသညျ အကွမျးမဖကျခွငျး သို့မဟုတျ-သူ့အသကျကို မသတျခွငျးကို အမွငျ့မွတျဆုံး ကောငျးမွတျခွငျးတရားအဖွဈ ခံယူထားကွသညျ။ ဂြေးနားဝါဒ၊ ဟိန်ဒူဝါဒ နှငျ့ ဗုဒ်ဓဝါဒတို့သညျ အဟိံသဓမ်မဖွငျ့ သံသရာဝဋျဆငျးရဲမှ လှနျမွောကျခွငျး မုက်ခ (Moksa) ရရှိနိုငျသညျဟု ယုံကွညျကွသညျ။ ဂန်ဒီကမူ လူထဲက လူတယောကျ ဖွဈ၍ လူတို့၏ စီးပှားရေး၊ နိုငျငံရေး၊ လူမှုရေး နှငျ့ လောကီရေးတှငျ ရညျရှယျပွီး အဟိံသဓမ်မကို လကျခံကငျြ့သုံး ခဲ့သညျ။
“အဟိံသဓမ်မသညျ အမွငျ့မွတျဆုံး ကရုဏာထားခွငျးနှငျ့ ကိုယျကြိုးစှနျ့လှတျခွငျး ဖွဈသညျ၊ အဟိံသဓမ်မသညျ အကွမျးမဖကျခွငျး ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံတို့ကို မကြူးလှနျခွငျးဖွဈသညျ။ အဟိံသဓမ်မသညျ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာနျမာနတို့ကို စောငျ့ထိနျးခွငျး ဖွဈသညျ၊ အဟိံသဓမ်မသညျ ခှငျ့လှတျခွငျးကွောငျ့ စိတျကငျးခွငျး၊ သတိရှိခွငျး၊ ကြိုးနှံခွငျးနှငျ့ ဘုရားကို အကွှငျးမဲ့ အပျနှံထားခွငျး ဖွဈသညျ။”
ဂန်ဒီသညျ ယငျးဓမ်မကို ရငျဝယျပိုကျထားရုံမြှမက တျောစတှိုငျး (Tolstoy)၏ အကွှငျးမဲ့သဘောဆောငျသော ပရဟိတဝါဒ (Absolute Altuism) ကိုလညျး ယုံကွညျစှာ လကျခံခဲ့သူတဦး ဖွဈသညျ။ ဂန်ဒီက လူသညျ လူမှုရေး တာဝနျမြားကို ရှောငျလှဲ၍ မရခြေ။ လူ့လောကတှငျ လူမှုရေးတာဝနျကို ကြျောလှနျ၍သျော၎ငျး၊ လူမှုရေး တာဝနျနှငျ့ ကငျးကှာ၍၄ငျး၊ ပြျောရှငျခကျြ ဘာမှကို မရနိုငျဟု လကျခံထားသညျ။ ဂန်ဒီက အကွမျးမဖကျခွငျး ဝါဒကို လကျခံကငျြ့သုံးသူမြားသညျ သစ်စာရှိခွငျး၊ ကြိုးနှံခွငျး၊ သညျးခံခွငျး၊ မတ်ေတာထားခွငျး စသညျတို့ကို နားလညျသဘောပေါကျရနျ လိုအပျသညျ။ အကွမျးမဖကျခွငျးသညျ လူသား၏ ဝိညာဉျအား ဖွဈသညျ။ တိရစ်ဆာနျမြားတှငျ မရှိနိုငျခြေ။ တိရစ်ဆာနျစိတျရှိသော သူတို့သညျ အကွမျးဖကျခွငျး လကျခံကွသညျ။ သို့ဖွဈ၍ တိရစ်ဆာနျမြားလညျး ကာယအငျအားကွီးခွငျးနှငျ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးမှုကွီးထှား နရေသညျ။ လူသားစိတျထား ရှိသူသညျ လူ၏ဉာဏျသိက်ခာဖွဈသညျ။ အကွမျးဖကျခွငျးကို စောငျ့ထိနျးရမညျ့ တာဝနျတရပျဟု နားလညျရမညျ ဖွဈသညျ။ သို့မှသာ လူသားသညျ ပို၍ မွငျ့မွတျသောနရောသို့ ရောကျရှိမညျ ဖွဈသညျ။
ဂန်ဒီက အကွမျးမဖကျရေးနှငျ့ မတ်ေတာထားခွငျးတို့သညျ လူသား၏ ဂုဏျသိက်ခာဟုခံယူသညျ။ မညျသညျ့အမှုကိစ်စကို မဆို ဆောငျရှကျသညျ့အခါ ဖျောပွပါအယူအဆမြားသညျ လူသားကိုလမျးညှနျပွသ
နသေညျ။ အမြားအကြိုး စီးပှားဖွဈ၍ တဦးတယောကျ၏ အကြိုးစီးပှားကို ပကျြပွားစခွေငျးသညျ အကွမျးဖကျခွငျးတမြိုးဖွဈသညျ။ အကွမျးဖကျခွငျးကို လူသားတဦးတယောကျကိုသျော၎ငျး၊ လူ့အဖှဲ့အစညျး တရပျကိုသျော၎ငျး၊ မပွုလုပျသငျ့ဟု ဂန်ဒီက အဆိုပွုခဲ့သညျ။ ဂန်ဒီအလိုရ အကွမျးဖကျမှု ပွုလုပျသူမြားကို သညျးခံခှငျ့လှတျ၍ မတ်ေတာထားခွငျးဖွငျ့ နောငျတတရားမြား ဖွဈပျေါစပွေီး အကွမျးဖကျလုပျခွငျးကို ရပျဆိုငျးလာမညျဟုဆိုသညျ။ ဂန်ဒီသညျ ရနျကိုရနျခငျြး မတုံ့ပွနျဘဲ ဗွိတိသြှတို့၏ စဈဖိနပျအောကျမှ သှေးကငျးသော တျောလှနျရေးကို ဆငျနှဲခဲ့သညျ။ ၁၉၃၀-တှငျ ဗွိတိသြှတို့က အိန်ဒိယတိုငျးရငျးသားမြားသညျ အသံတိတျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွသညျ။ ထိုဆန်ဒပွမှုကွောငျ့ အိန်ဒိယတိုငျးရငျးသားမြား ထောငျသှငျးအကဉျြးခခြံခဲ့ရသညျ့ပွငျ ဗွိတိသြှ အာဏာတို့၏ ညှငျးပနျးနှိပျစကျမှု အမြိုးမြိုး ခံခဲ့ရသညျ။ သို့သျော ဂန်ဒီက ဗွိတိသြှအစိုးရကဲ့သို့ အကွမျးဖကျနညျး မသုံးဘဲ မတ်ေတာထား၍ အကွမျးဖကျမှုမြား ပွနျ၍ မပွုကွရနျ ဟောပွောခဲ့သညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဂန်ဒီ၏ အကွမျးမဖကျရေး အယူအဆကို ကမ်ဘာက မှတျပွုခဲ့သညျ။ ထိုသို့ အသိအမှတျပွုသူမြား အနကျ အဲ့လဗကျ အိုငျးစတိုငျး (Albert Einstein) နှငျ့ လူဝီ ဖဈရှား (Louis Fisher) တို့သညျ ထငျရှားသညျ။
“ကမ်ဘာကြျော သိပ်ပံပညာရှငျ အဲလဗတျအိုငျစတိုငျးက အန်ဒိယအမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဖွဈ၍ ပွငျပနိုငျငံမြားမှ အားပေးကူညီမှုကို မရရှိခဲ့ခြေ။ တျိုကျပှဲတိုငျး အောငျနိုငျမှု ဖွဈသျောလညျး မညျသညျ့အငျအားကိုမြှ အသုံးမပွုခဲ့ခြေ။ ဥရောပ၏ ရကျစကျကွမျးကွုတျမှုမြားကို သာမနျလူသားတို့၏ ဂုဏျသိက်ခာနှငျ့ ရငျဆိုငျခဲ့ခွငျးဖွငျ့ အိန်ဒိယသညျ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့သညျဟု ဂုဏျပွုဖျောပွခဲ့သညျ။
“လူဝီဖဈရှားက အိန်ဒိယသညျ အဏုမွူကို စှနျ့လှတျ၍ အဟိံသဓမ်မကို လကျကိုငျအသုံးပွုခဲ့သညျ။ ဂန်ဒီသညျ နြူကလီးယားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အလှနျငယျသောကလေးအဆငျ့တှငျ ရှိနသေျောလညျး ကိုယျကငျြ့တရားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အလှနျအမွငျကယျြပွီး ရငျ့ကကျြသူတဦး ဖွဈသညျ။ ဂန်ဒီသညျ သူတပါး၏ အသကျကနျ့သတျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဘာမြှမသိသျောလညျး နှဈဆယျရာစုတှငျ အသကျရှငျနနေိုငျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍မူ မြားစှာအထောကျအကူ ပေးနိုငျခဲ့သညျဟု လူဝီဖဈရှာက ဂုဏျပွုဖျောပွထားသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဂန်ဒီ၏ ဒဿနကိုကွညျ့လြှငျ အဟိံသဓမ်မ အခွခေံပွီး တညျဆောကျပွီး အရာရာကို အဟိံသဓမ်မဖွဈသော အကွောငျး၊ စာဖတျရရေးဝါဒ ရှုထောငျ့မှ ဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး တှရေ့ရုံမြှမက သူ၏ အဟိံသဓမ်မသညျ ကမ်ဘာပျေါရှိ အကွမျးတမျးဆုံး လကျနကျမြားထကျပငျ စှမျးပကားကွီးမားခဲ့သညျကို
သှေးကငျးသော အိန်ဒိယတျောလှနျရေးဖွငျ့ သကျသပွေခဲ့သညျဟု ဆိုရမညျ ဖွဈပသေညျ။